Amadlozi esikweni lamaxhosa
Ancestors in Xhosa Tradition
Imimoya esebenzayo noma ama-shade ngokuvamile abafana abashonile beqembu le-agnatic. IsiXhosa sikhuluma okhokho njenge-iminyanya, kuyilapho iPondo ibiza ngokuthi i-amathongo. Ngokuphawulekayo amadoda enesisindo nethonya ngesikhathi sokuphila kwawo, ama-shade abaholi babalandelwayo - abaqashi bomndeni, abaholi bezinhlanga kanye namakhosi asekude okude - abahlala emasontweni asezindaweni zokuxhumana kanye nezinzalo eziningi. Ihlelo lobukhokho liyinhloko yokukhulekela i-home unit, umndeni owandisiwe. Njengesixhumanisi esiphila phakathi kwamalungu omkhaya kanye nokhokho beqembu le-agnatic, inhloko yendoda yesilisa isebenza ngezikhathi zomkhuba, ngokwayo noma ngommeli.
Inhloko yendlu efile ihlanganiswe namadodana akhe njengokhokho wendlu, inqubo evame ukuhilela imihlatshelo emibili. Esikhathini sokuqala (umkhapo), ihlatshwa imbuzi emhlophe engenasici ukuze ihambisane (ukukhapa) umoya womuntu oshonile ukuya emathunzini. Ngesibili (umbuyiso), inkabi ihlatshwa ukubuyisela (ukubuyisela) umoya womuntu oshonile njengokhokho ukuze ahlasele phezu kwe-aves kanye nombundu wendlu. Nakuba izikhulu zamandulo zazivame ukufakwa emanzini omfula noma ehlathini, izinhloko zasendlini zazingcwaba ezinqabeni zezinkomo eduze kwesango.
Bonke abantu asebekhulile abafa, abesifazane abangaphansi kwamadoda, baba yizikhokho futhi bangathonya izimpilo zenzalo yabo, bekhuluma nabo ngamaphupho kanye nezimpawu. Owesifazane angaba umoya wokhokho kubantwana bakhe, izingane zezingane zakhe kanye nezingane zomfowabo. Nakuba okhokho beqembu le-agnatic lapho azalwa khona baqhubeka benethonya owesifazane emva komshado, owesifazane oshadile naye ucatshangwa ukuthi uthonywe okhokho bomyeni wakhe futhi. Lokhu kuboniswa ngokufanisayo emcimbini womshado wendabuko (umdusi), lapho umakoti ephonsa umkhonto, okayise womkhwenyana, engena esangweni lezinkomo zakhe (uhlalsa umkhonto). Uma owesifazane egula noma ebizwa ukuba abe umphulukisi, inhloko yendlu lapho azalwa khona, noma ummeleli wakhe, ubophezelekile ukuba enze umhlatshelo odingekayo egameni lakhe.
Imisebenzi Eyenzelwa Amadlozi
Ngokungafani nokugula kanye nosizi, imikhosi yendabuko (amasiko) yenziwa cishe kuzo zonke izigaba zomjikelezo wokuphila, kusukela ekuzalweni ngokusebenzisa ubusuku, ukushada nokuya esikhathini sokufa. I-Cape Nguni isebenzisa yonke imidwebo yezifanekiso ngokubhekisela emimoya nasezweni elingokomoya. Mhlawumbe esinye sezidalwa ezindala kulezi zifanekiso ezisetshenziselwa okhokho umoya (umoya), igama elawamukelwa yizithunywa zevangeli ngoMoya oNgcwele futhi lisetshenziswe ngezihumusho zesiXhosa seBhayibheli kusukela ngaleso sikhathi. Imikhosi yendabuko isenziwa kabanzi namuhla, nakuba ifomu eliguquguqukayo nelinqanyelwe, kokubili ezindaweni zasemaphandleni nasemadolobhaneni aseMadolobheni naseMadolobheni aseNingizimu Afrika.